Golaha Shacabka Oo Maanta La Hor Geynayo Miisaaniyadda 2019-ka – Kalfadhi
Golaha Shacabka ayaa Kulankiisa maanta waxa uu ku eegayaa Miisaaniyadda 2019-ka, oo ay horay Xukumaddu u soo ansixisay. Waxaa maanta lagu wadaa in la mariyo aqrintiisa koowaad, hase ahaatee waxaa suuragal iney Xildhibaanadu wax ka bedelaan ajandaha.
Isla kulanka Golaha ee maanta waxaa aqrintii saddexaad lagu marinayaa Hindise Sharciyeedka Dhismaha Hay’adda Dadka Naafada ah. Xildhibaanada ayaa Kulamadii hore ee Kalfadhigaan Afaraad ee Golaha si adag uga dooday Hindisahaan. Markii uu maro aqrintiisa saddexaad, waxaa la filayaa inuu Goluhu geliyo cod, siyuu u noqdo Xeer.
Wasaaradda Haweenka iyo Hormarinta Arrimaha Bini’aadanimada, oo Hinidise Sharciyeedkan soo diyaarisay ayaa sheegtay in dadka naafada ah, oo yeesha hay’ad u gaar ah, ay wax weyn u tareyso naafada. Sida ay Xildhibaano horay uga dhex sheegeen Golaha Shacabka, naafada ayaa qiyaastii 24% ka ah tirada guud ee dadka Soomaaliya.
Ajandaha koowaad ee Kulanka Golaha Shacabka ee maanta, oo ah Miisaaniyadda Dowladda ee 2019-ka, ayaa xiisa gooniya u leh Xildhibaanada. Wasaaradda Maaliyadda ayaa si hordhac u sii sheegtay in ay Miisaaniyadda dowladdu gaartay $340,000,000, halka ay sanadkan sii dhamaanaya ka ahayd $274,000,000, oo gadaal looga sii kabay $22 milyan iyo bar oo Doolarka Mareykanka ah.
Warbixin, aan goordhaw idiin soo daabici doono ayaa soo koobi doonta Miisaaniyadda 2019-ka, taas oo aynu idinku tusin doono sida loo qoondeeyey iyo waxa ay dowladdu dooneyso iney yeesho, haddii sida loo qorsheeyey loo waayo Miisaaniyaddaas.